Ibhafu yeBlue eyenziwe ekhaya - Ulusu Care Product
Ibhafu yeBlue eyenziwe ekhaya
Nangona ngokuqinisekileyo kutshiphu ngokwaneleyo ukuba kungathengwa, kunokuba mnandi kwaye kunomvuzo wokusebenzisa ibhafu yokuhlambela eyenziwe ekhaya. Nokuba yeyabantwana, njengesipho, okanye ngokwakho, ibhafu yokuhlambela ihlala ikhethekile. Xa inezinto zendalo ezingabizi mali eninzi ozihlanganisele wena, yeyona nto intle kakhulu.
Izimvo zetheko lokuzalwa zeminyaka eli-13
Iziseko zeBlue Homemade Bath
Kulabo bahlala bebhola, kunokubonakala kunzima ukukholelwa ukuba nantoni na onokuyenza ekhaya iya kusebenza. Ufuna iziduli zamabhamu ezihlala zide ukuba amanzi ahlala eshushu, hayi ii-suds ezimbalwa ezingaqhelekanga. Yilungiselele ukumangaliswa, kuba uyenze kakuhle, ungafumana ibhafu yokuhlambela ungasebenzisi zongezo.
Izithako eziphambili ekwenzeni i-Lotion
Eyona mveliso ilunge kakhulu yokuKhathalela ulusu
Izithako ezisisiseko zebhabhu eyenziwe ekhaya zi:
Isepha egayiweyo okanye isepha
IGlycerin (qiniseka ukusebenzisa inguqu yemifuno)
Ioyile ebalulekileyo (ukuba ufuna ibhafu enamakha)
Abanye abantu bakhuthaza ukusebenzisa ishampu, kodwa ukuba uhamba ngale ndlela, qiniseka ukusebenzisa ishampu ye-organic, njengoko iikhemikhali ezinobungozi kwiimpawu eziqhelekileyo akufuneki zinxibelelane kakhulu nolusu lwakho, ngakumbi amalungu esini.
Ngokungafaniyo nezinye izinto zokuhlamba ezenziwe ekhaya, ezinje ngeetyuwa okanye ukukhuhla komzimba, ukwenza ibhafu yokuhlambela kunokuthatha umzamo omncinci. Owona mxube ulula awunakuba ungoyiki, kodwa sisiqalo esihle. Hlanganisa indebe yesepha ecocekileyo ye-castile kunye nekomityi ye-3/4 yamanzi, i-teaspoon ye-glycerin kunye namaconsi ambalwa eoli efunekayo. Zigalele zonke kwibhotile enokuphinda isebenze- ngakumbi ekukhetheni iglasi- kwaye udibanise amathontsi kwindawo yokuhlambela elandelayo. Zama ukuqonda ukuba ufuna kangakanani.
Eyona ndlela ibandakanyekileyo yokwenza ibhabhu yasekhaya idibanisa isepha okanye ibar yesepha, ilitha yamanzi kunye neeyunce enye okanye enye enesiqingatha se-glycerin ngaphezulu kwesitovu kubushushu obuphantsi. Xa isepha ichithakele, linda de ube umxube upholile ngokupheleleyo, emva koko udibanise ioyile ebalulekileyo. Gcina kwisitya esikhulu seglasi kwaye ungeze njengoko kufuneka.
Kutheni ufudo lwam lungatyi
Abantwana abanomdla ngokukodwa kwindawo yokuhlambela, kodwa abasetyhini bayifumana yenye yezona zinto zinqabileyo emhlabeni. Kuya kufuneka uqhubeke nokuzama ukuvumba kunye nesithako sokuthambisa esikusebenzelayo. Xa usebenzisa iioyile ezifanelekileyo, nangona kunjalo, yonga kakhulu. Unokumangaliswa ukuba ithontsi linye linokufikelela phi. Ngapha koko, kunokuba nzima kwisitya esishushu, ke ukuba ufuna ngakumbi indlela yevumba elimnandi, zama ezinye izinto ezinje ngeoyile yealumondi okanye yekhokhonathi.
Ngaba iibhaktheriya ziyafa xa zifriji okanye zifriziwe
Ezi oyile zimbini zilunge ngakumbi ukongeza ukufuma okungaphezulu. Iibhafu zinokumiswa, ke ukuba uza kucwina ixesha elide, ngokuqinisekileyo ufuna into yokuthambisa ngaphakathi ukuze ungagqibi ukuthena okukhulu.
Ungalibali ukuba idrop okanye ezimbini zevanilla zenza yonke into ibe yummier.
Nangona ungasebenzisa nayiphi na isepha okanye i-shampoo ukwenza i-bubble bath yakho, i-castile ikude kwaye ikhetha kakhulu. Yeyona sesepha yendalo ikhoyo kwaye inyibilika kakuhle kwibhafu yokuhlambela emnandi. Ngapha koko, isepha ye-castile sisixhobo esicocekileyo esinokuthi usisebenzise xa uhlamba iinwele zakho. Emva koko, ungasebenzisa isepha engaphezulu ukucoca ibhafu, ukuba iyafuna.
Isepha yeCastile ibijikeleze iminyaka kodwa ibonwabela ukuvuseleleka kade ngenxa yexabiso eliphantsi, izithako eziphilayo kunye nokuguquguquka okugqithisileyo. Unokwenza nesepha yakho ye-castile ukuba ufuna ukuba nebhongo. Olona hlobo lwentengiso luthandwayo UGqr. Imithombo , Eza kwiindidi ezahlukeneyo zevumba kwaye iqinisekisiwe yendalo. Ukuba uqala ukuyisebenzisela yonke into kwaye uzive ungakhululekanga ngazo zonke iibhotile zeplastiki, nangona zinokuphinda zisebenze kwakhona, unokuzama ukufumana imivalo kwaye uyinyibilikise, emva koko ugcine eseleyo kwiijagi zakho ezinokuphinda zisebenze. Xa kuziwa kwinto esondeleyo njengokuhlamba, ufuna ukuyigcina iyindalo, kwaye icoceke ngokusemandleni.
Guitar Lessons Honeymoon Ukukhempisha, Hiking, Backpacking Gear And Equipment Ukuthandana Iiwebhsayithi Candle Parties
ingaba nizakuba yimibongo yomolokazana wam
Iliwa lithengiswa kufutshane nam
zingaphi iiwathi ezisetyenziswa ngumndilili wendlu
indlela yokukhusela ngokukhuselekileyo izandiso
Imibuzo yabantwana / yamantombazana 8-10
kufuneka wenze ntoni ukuba inja yakho inengqele
ungayifumana phi inkawu
I-Disney Children's Iifilimu